मनोरन्जन – E-Ramechhap
यो दशैँमा के ले बाटो छेक्यो : दशै गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
संगीतिक बजारमा गीतहरु धेरै भन्दा धेरै आउनेक्रम जारी रहेको छ । रिल चक्कामा भरेका गीतहरु क्यासेटमा बजाउने देखी आएर अहिले युट्युबमा गीत रिलिज गर्ने सम्मको समयमा आइपुग्दा सम्म पनि गीतहरु उत्तिकै मात्रामा बजारमा आइरहेका छन् । पहिला क्यासेटमा जस्तै अहिले पनि सदाबाहर देखी सिजन अनुसारका गीतहरु बजारमा आइरहेका छन् । दशै नजिकिँदै गर्दा दशैँ सम्बन्धी […]
नयाँ तिज गित जिन्दगानी आखिर के रैच र बजारमा (भिडियो सहित)
नेपाली सांगितिक बजारमा ‘जिन्दगानी आखिर के रैचर’ बोलको तिजको गित सार्वजनिक भएको छ । हरितालिका तिजलाई लक्षित गर्दै बजारमा आएको उक्त गितलाई एबीएस म्युजिक प्रालिले आफ्नो युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । उक्त गितमा कल्पना सुन्वार,आशा केसी,सब्बु सरगम,सपना घर्ती मगर,सपना सुनाम,सिता नेपाली,अम्बिका लुईटेल र ममता राना मगर सहित आठजनाले स्वर दिएका छन् । उक्त […]
शान्तिश्रीको आवाजमा तिजको गित बजारमा (भिडियो सहित)
रामचन्द्र बोगटीको शब्द मा रहेको तिजको मार्मिक गित बजारमा सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समयमा देखा परेको कोभिड १९ को प्रभावको कारण श्रीमान गुमाएका महिलाको पीडा लाई गितमा जस्ताको त्यस्तै उतारिएको छ। प्रकाश भट्टको निर्देशन मा रहेको गित बिष्णु शर्माले सम्पादन गरेका छन । “माहामारीमा आमा” भन्ने गित को बोलमा शान्तिश्री परियारको स्वर रहेको तिज […]
पशुपति शर्माको नयाँ गित देश लुटेर खानी बजारमा ( भिडियो सहित )
रामेछापका गितकार यामप्रसाद निउरेको नयाँ गित देश लुटेर खानी बजारमा आएको छ । पछिल्लो समय देशमा घटिरहेको सामाजिक,आर्थिक,राजनितिक,अपराधिक ,भ्रष्टचार बिबिध बिषयलाइ समेटेर नयाँ गित देश लुटेर खानी बजारमा आएको छ । गितमा गायक पशुपति शर्मा, रमेशराज भट्टराइ,सागर बिरही,सुनिता बुढा,संगित गैरेको आवाज रहेको छ । त्यस्तै सागर बिरहीको गितमा संगित रहेको छ । गित एन्जल म्युजिकबाट […]
औँठी सुनैको लोकगीत बजारमा (भिडियो सहित)
मोडल तथा सर्जक रमन पहाडीले लय भरेको औठी सुनैको बोलको गीत भरखरै बजारमा आएको छ । जसमा पछिल्लो समय चर्चित लोक गायक निकेश तामाङ र नव गायिका तुलसा तामाङ ले सुमधुर स्वर भरेका छन भने एरेन्ज यम थापाले गरेका छन् । गितको अडियो भने लेकालि स्टुडियोबाट मान ब. बरालले ले तयार पारेका छन । नेपालि […]
रामेछाप सांस्कृतिक कलाकार समाजलाई थप शसक्त बनाईने
रामेछाप सांस्कृतिक कलाकार समाजलाई थप शसक्त बनाइने भएको छ । रामेछाप जिल्लाका कलाकारहरुको साझा संस्था रामेछाप सांस्कृतिक कलाकार समाजलाई थप शसक्त बनाउदै आगामी दिनमा धेरै भन्दा धेरै कलाकारहरुलाई जोड्दै जाने निर्णय गरिएको हो । शनिबार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा पालिकास्तरीय अन्तरकृया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न छलफल तथा निर्णयहरु गरिएको हो । जिल्लाको ८ वटै […]
रामेछाप जिल्लाको सुनापती गाउँपालिकामा रामेछाप सांस्कृतिक कलाकार समाज गठन गरिएको छ । सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा समिती गठन गरिएको हो । गठन गरिएको समितीमा अध्यक्ष सुमन खड्का,उपाअध्क्षमा दिपक खड्का,महिला उपाअध्यक्षमा रमिला श्रेष्ठ,सचिवमा प्रेम खड्का,सहसचिवमा वशन्त कार्की,कोषाअध्यक्षमा सन्देश श्रेष्ठ,सहकोषाअध्यक्षमा सिजा चौलागाई,संयोजकमा भिमसेन गौतम,सल्लाहकारमा राज मैनाली,किरण राज घिसिङ्ग र पवन विक्रम परियार […]
रामेछाप साँस्कृतिक कलाकार समाज रामेछाप नगर कार्यसमिति गठन
रामेछाप साँस्कृतिक कलाकार समाज रामेछाप नगरपालिका कार्य समिति गठन भएको छ । आज रामेछाप नगरपालिकाको सभाहलमा एक कार्यक्रमको विच नयाँ कार्य समिति गठन भएको हो । रामेछाप साँस्कृतिक कलाकार समाजका कार्य समिति सदस्य एवम नगर कार्य समिति गठन कार्यक्रमका संयोजक हरि बहादुर काफले मगरको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रमबाट नविन पुलामी मगरको अध्यक्षतामा १३ सदस्य नयाँ […]
नेपाली इतिहासकै बबाल सबैले हेर्ने पर्ने! यस्तो पो त बिहे ?
बहुमुखी प्रतिभाका धनि स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई र उनका बालापनदेखिका साथी जीवन बिष्ट एकै मण्डबमा मङ्सिर २२ गते विवाह बन्धनमा बाधिएका छन । रमेशले कालिकोटकी नन्दासिंहसँग लगनगाठो कसेका हुन भने उनका सहयात्री साथी जीवन विष्टले तामाङकि छोरीसंग धुमधाम बिबाह गरेका छन । रमेशको बिबाहमा रबि लामिछाने देखि ज्ञानेन्द्र शाही सम्मका धेरैको उपस्थिति रहेको थियो । […]